စီးပွား / အောင်မြင်
စိုက်ပျိုး / မွေးမြူရေး
အတ္ထုပ္ပတ္တိ / လူပုဂ္ဂိုလ်
တက်လမ်း / အောင်မြင်ရေး
(၁) မှ (၆) ပေါင်းချုပ်
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ကို ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်မှ (၁) ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) သင့်ဖောက်သည်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ၊ (၂) ဒေါ်နုကြည် (မဟာဝိဇ္ဇာ) စိတ်ကူးလိပ်ပြာ စာစီစာကုံးများ စသည့် စာအုပ်၂အုပ် ကို ၁၉၉၉ခုနှစ် မတ်လမှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
စာအုပ်တိုက်က ယခုထိ ထုတ်ဝေနေတဲ့ ဂျာနယ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
Sport Light အားကစား ဂျာနယ်
Newday News သတင်းဂျာနယ်
Ourways ကို ခေတ္တရပ်နားထားပြီး educator ဂျာနယ်ကိုတော့ ၁၅ ရက်တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေပါတယ်။
စာအုပ်တိုက်ဟာ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် အတိုင်းအတာတစ်ခုရဖို့နဲ့ စာပေအကျိုးအမြတ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရဖို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စာအုပ်ဈေးကွက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစားမှန်သမျှ ထုတ်လုပ်သွားဖို့ အင်တိုက်အားတိုက် အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သုတစာပေနဲ့ ဆက်နွယ်လာတဲ့ စာရေးဆရာအသစ်များကို လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိရင် ရှိသလို လမ်းကြောင်းဖွင့် ထုတ်ဝေပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။ ရသစာရေးဆရာအသစ်များအတွက် လတ်တလော စီစဉ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများမှာ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူများကိုတော့ ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုဘဲ ကမ်းလှမ်းချက်များအတိုင်း အလှည့်ကျ ထုတ်ဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်တိုက်အပေါ် ဝေဖန်အကြံပြုညွှန်ပြတာတွေကို အမြဲတမ်း လက်ခံကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အမှားအယွင်းကင်း၊ အပြစ်အနာအဆာ နည်းတဲ့ ထုတ်ဝေရေးမျိုးဖြစ်အောင် အမြဲပြုပြင်အားထုတ် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် ပညာရှင်များနဲ့ အဆင့်ဆင့် ၀န်ထမ်းများကြားက ပေါ်ပေါက်လာ တဲ့ အမှားအယွင်းတို့အတွက် ခွင့်လွှတ်ဖြည့်စွက်အားပေးခဲ့ကြသူ စာဖတ်ပရိသတ်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိသလို လေးလေးစားစားလည်း အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စာအုပ်တွေ မပျောက်ကွယ်သွားရေးအတွက် စာအုပ်ချစ်သူများဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်ဟာ အမြဲဖြည့်စွမ်းခွင့်ရရှိချင်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပုံနှိပ်တိုက်ရဲ့ လိပ်စာက ၆၇၊ ၁၆၄ လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်မှာပါ။ အလုပ်အပ်နှံရင်လည်း အဲဒီမှာပဲ အပ်နှံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများနည်းတူ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်၊ လက်ကမ်း၊ ကြော်ငြာ၊ ပြက္ခဒိန်၊ လိပ်စာကတ် စသည်ဖြင့် အားလုံး ရိုက်နှိပ်ပေးသလို အထူးဆောင်ရွက်ပေးမှာက စာအုပ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Book Making) ပါ။
အပ်နှံလာတဲ့ စာအုပ်မျိုးစုံကို အပြီးအစီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရာမှာ အပ်နှံသူ အလိုရှိတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ကောင်းနိုးရာရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ဈေးကွက်နဲ့ အံဝင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမူကနေ စာအုပ်အထိ လိုအပ်တဲ့အဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
စာအုပ်တွေ ဖြန့်ချိဖို့ကိုတော့ ဖြန့်ချိရေးဆောင်ရွက်ရာတိုက်များနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးချိုချို မှ ဦးစန်းဦးနှင့် စကားစမြည်
ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်းကနေ ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်းအဖြစ် အမည်ပြောင်းထုတ်ဝေလာတဲ့ ပထမလမှာ စကားစမြည်ကဏ္ဍ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ စကားစမြည်ကဏ္ဍကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကဗျာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာအမြင်အဖြစ် ပြောဆိုခဲ့တာမို့ ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တွေးဆဆွေးနွေး ဝေဖန်စရာလည်းဖြစ်တာပေါ့။
၁။ မေး။ ယနေ့မြန်မာမော်ဝန်ကဗျာတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မှာ ဆရာ့အနေနဲ့ သုံးသပ်မိတာ များရှိပါ သလား။ (ဥပမာ) L.P ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားကဗျာ၊ ဩဒါမှမဟုတ် ကွန်ဆက်ချူ ရယ်ဆိုတဲ့ကဗျာ အဲဒီလိုကဗျာလမ်းကြောင်း တွေဆိုပါစုိ့?
ဖြေ။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာကဗျာဆရာတွေဟာ ၀ဋ်ကြီးလှတယ်။ ဒီနေ့ထိ တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေကြရတုန်း။ ဒီနေ့ထိ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲနဲ့ အမှန်တရားတိုက်ပွဲကို ၀င်နေကြရတုန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေကို ဖတ်ရတဲ့ အခါမှာလည်း ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲရေးရေး မြုပ်ကွယ်လှည့်စားပုံဖော်ပုံဖော် ဘယ်လို ကဗျာ ပုံသဏ္ဍာန်ဆီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အများစုဆီမှာ အဲဒီ(Own Style)ကိုပဲ ခံစားနေရတယ်။ အရိပ် အငွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့နေရတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးခေတ်၊ အေးချမ်း သာယာရေးခေတ်၊ လွှတ်တော်ခေတ် ခေတ်အဆက်ဆက်ရဲ့ပဲ့တင်ပေါ့။ ဒါဟာ ကဗျာဆရာ တွေကို အပြစ်မြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မာရေကျောရေနိုင်လှတဲ့ နိုင်ငံရေးအခွံထူကြီးကို မြင်ယောင်မိတာပါ။
ကဗျာဆရာဟာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ခေတ်အပေါ် တာဝန်ကျေ ဦးကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးဆိုရင် တောင် ပဲ့တင်သံတောင်တန်းကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာဆရာတွေဟာ အခြားသူများလိုပဲ လွတ်လွပ်တဲ့ဘ၀မှာနေထိုင်ချင်ကြတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးစောင့် ရှောက်တဲ့ဒေသမှာ အသက်ရှင်ချင်တယ်။ လူတစ်ယောက်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး တွေရချင်ကြတယ်။ ဒီအချက်တွေ ပြည့်စုံတဲ့အခါ ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ အတွင်းသားကျကျ ဘ၀အမြင်တွေ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဖန်တီးမှုအကောင်းစားတွေကို ကိုယ့်လိုပဲ လွတ်လပ်အေးချမ်းလုံခြုံနေတဲ့ ကဗျာဖတ်ပရိသတ်တွေနဲ့ ခံစားဖလှယ်မျှဝေချင်တယ်။ အခုတော့ ပြည့်စုံမှုဟာမလာဘူး။ လွတ်လပ်မှုဟာ အချုပ်အနှောင်ခံရတယ်။ တရားဥပဒေ ဟာ အမြင့်ပျံငှက်။ ဒီတော့လည်း ဒီအခြေခံပေါ်မှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ခေတ် ရဲ့ကဗျာများ ဆီက ဒီအနံ့တွေသာ ရနေဦးမှာပါ။
နောက်ပြီးတော့ ရေးဖွဲ့ပုံအကြောင်းပေါ့။ (မော်ဒန် ဒါမှမဟုတ်) ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရဲ့လမ်း ကြောင်းကတော့ အပီအပြင်မဟုတ်သေးတဲ့ လမ်းခွဲတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ ဒီမှာ ဒီခေတ် မြန်မာကဗျာဆရာတွေ စိတ်အ၀င်စားဆုံး လူပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာက L.P နဲ့ ကွန်ဆက်ချူရယ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီဟန်ပန် ကဗျာတွေက ဒီဆယ်စုနှစ်တွေကို အလွှမ်းမိုး ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ နိုင်ငံတကာ ကဗျာရေစီးကြောင်းရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံရတဲ့ မြန်မာကဗျာရဲ့ အသွင်းသဏ္ဍာန်အဖြစ်သာမြင်ပြီး နှစ်သက်ခြင်းတော့ ပြည့်ပြည့်၀၀ မရှိပါဘူး။ ကဗျာဆရာကြီး/ငယ်တချို့ရဲ့ L.P ပုံစံ ကဗျာတွေကို ကြိုက်မိသွားတာ၊ ကောင်း လိုက်တာလို့ ရေရွတ်ရင်ခုန်မိတာရှိပေမယ့် စကားလုံးတွေပြွတ်သိပ် အားထည့်ထားတာပဲ သတိပြုမိပြီး အဆုံးထိမဖတ်ဖြစ်ဘဲ ရှိခဲ့တဲ့ကဗျာတွေလည်း ခပ်များများရှိလာတယ်။
ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်။ မှားရင်လည်း တည့်မတ်ပေါ့။
တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဟိုက္ကူကဗျာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရတယ်။ တချို့လည်း မြန်မာစာနဲ့ စမ်းသပ်ရေးကြည့်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာဟိုက္ကူကဗျာရယ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံခဲ့ကြခြင်းမရှိဘူး။ ပြောစမှတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘာသာစကားနဲ့ကဗျာရဲ့သဘောရှိနေ တော့ မူလသဘောသဘာဝကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖမ်းဆုပ်မရခဲ့ကြဘူး။
တစ်ဖက်မှာ မြန်မာကဗျာရဲ့ အဲဒီအချိန် ရှိပြီးသားလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ၃ ကြောင်းဖွဲ့ ကဗျာတွေကတော့ စွဲစွဲမက်မက်ထင်ကျန်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းအလွတ်ရနေတဲ့ ၃ ကြောင်း ကဗျာတွေ ကဗျာချစ်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခုထိ ရှိနေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမှာက မြန်မာ L.P ကဗျာဆိုတာကို ဘယ်လောက်ထိ ပြောင် မြောက်အောင်ရေးကြမလဲ။ ကွန်ဆက်ချူရယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အယူအဆကို ယူမှာ လား။ ရေးဖွဲ့ပုံကိုယူမှားလား။ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာရေးသူတွေ ဘာကိုပြောနေကြသလဲ။ ရေးနေကြသလဲဆိုတာ အချိန်ယူလေ့လာပြီး သုံးသပ်ဝေဖန်လာကြမယ့် ဝေဖန်ရေးဆရာ၊ အကဲဖြတ်ဆရာရှိရမယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ဘယ်သူတွေယူမှာလဲ။ ကွန်ဆက်ချူရယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြရာမှာတောင် အနုပညာသမားအချင်းချင်း ကွဲလွဲ ချက်တွေရှိနေသေးတာ တွေ့နေရဆဲကိုး။ ကဗျာဆရာကတော့ တာဝန်ယူစရာမလို လောက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ကြရင်း၊ ရေးစရာရှိတဲ့အရာကိုရေးကြရင်း၊ မိမိလက်ခံယုံကြည်ရာကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းနဲ့ အချိန်ကာလရဲ့ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုတော့ ရှိလာမှာပါ။ ကြိုပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရသလိုကြိုပြီးလည်း ကြွေးကြော်လို့မရပါဘူး။ တစ်ယောက် ကောင်းကိစ္စတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။
၂။ မေး။ နောက်...ဆရာရဲ့“ကိုယ်ပိုင်ဟန်” (Own Style) နဲ့ ရေးနေကျ ကဗျာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီကဗျာထဲက လိုပဲ“စိတ်တွေကို အပုံလိုက် ဖြည်ချထားရတဲ့အရသာမျိုး”ရမှ ကဗျာရေး လိုက်တာလား?
ဖြေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို ပီပြင်အောင် မတည်ဆောက် နိုင်သေးဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်ချင်သူတစ် ယောက်ဟာ အရာရာဆီကကို လွတ်မြောက်ချင်နေတာပါပဲ။ စိတ်တွေကို အပုံလိုက်ဖြည်ချ ထားရတဲ့အရသာကိုတော့ အလွန်တရာ နှစ်ခြိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တောင့်လည်းတောင့်တပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောနေကတည်းက မရနိုင်သေးဘူးဆိုတာ ဆရာရိပ်စားမိမှာပါ။
၃။ မေး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောက အနုပညာပစ်္စည်းတစ်ခုဟာ ပြဒါးဖမ်းရသလို ဖမ်းရခက် တယ်။ ကဗျာဆိုတာ “အလှထွတ်ခေါင်” (Beauty of Roof) ဆိုတော့ ဆုပ်မိကိုင်မိရတာ လည်းခက်တယ်။ အဲ...ရပြီဆိုလည်း ကဗျာရဲ့ အလှဗေဒကိုရတာ။ အဲဒါကြောင့် ကဗျာ အရေးကျဲရတာများလားခင်ဗျား။
ဖြေ။ ကဗျာဟာ အဖိုးထိုက်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ အလှတရားရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း သေချာတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကဗျာရေးနိုင်လောက်တဲ့ စိတ်အကြည်ဓာတ်ဟာ ပူးတုံခွာ တုံဖြစ်နေတာကြာပါပြီ။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မိရင် မရပ်မနား အရှိန်မြှင့်သွားချင်တဲ့စိတ်က စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းဆီ ကျွံဝင်နေပါတယ်။ ဒါကို ကဗျာရေးစာရေးကိစ္စဆီ ပြန်ပြီးဆွဲ ခေါ်ရဦးမှာပါ။
၄။ မေး။ ယနေ့ မြန်မာမော်ဒန်ကဗျာလောကကြီးဟာ “တရားဝင်ကဗျာယဉ်ကျေးမှု” (Official Verse Culture)အဖြစ် ရပ်တည်လာတာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်လာပါပြီ၊ မြန်မာ မော်ဒန်ကဗျာဟာ ရွှေရတုပွဲတော်ကြီးတောင် ကျင်းပလို့ရပါတယ်။ ဆရာတို့က အဲဒီလမ်း ကြောင်းထဲရောက်လာတာ နှစ်(၃၀)ကျော်ရှိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ယနေ့ ဆရာ့ကဗျာ လမ်းကြောင်းကို အသစ်တစ်ဖန် ပြောင်းလဲရေးသားဖို့များ ရှိပါသလား?
ဖြေ။ ဘာဖြစ်လို့ တရားဝင်ဖြစ်ချင်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒီမိုကရေစီပျောက် ဆုံးခြင်းနဲ့ အတူ Official ကိစ္စတွေဟာ ၀ိဝါဒကွဲပြားနေခဲ့တာ ကြာပြီပဲ။ အနုပညာကိစ္စတွေအတွက် တော့ ပိုပြီးဆိုးရွားပါတယ်။ အနုပညာကို အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဟာ ဘယ်တော့မှ ထင်ထင်လင်းလင်း အကဲမဖြတ်ပါဘူး။ အရိုးစွဲနေတဲ့ ပို့ချချက်တွေနဲ့သာ အနုပညာကို မြင်ပါတယ်။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ခုတုံးလုပ်ပါတယ်။ အနုပညာပွင့်လင်းမှုနဲ့အတူ တစ်စုံတစ်ရာ လင်းပွင့်သွားမှာ စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ဆရာ့အမြင်ကိုတော့ ဘာမှ မပြောလို သော်လည်း အနုပညာသမားတစ်ယောက် ကဗျာဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ တရား ၀င်တာမ၀င်တာကို ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မစဉ်းစားကြသူတွေ ဖောက်ခဲ့ လျှောက်ခဲ့ကြလို့ လမ်းကြောင်းဟာ ရှင်းရှင်းထင်းထင်း ဖြစ်နေပြီပဲ။ ဉ်ငခငေူ ဆိုတာကြီးနဲ့ တော့ ဝေးနေဦးမှာပါ။
နောက်ပြီး မြန်မာမော်ဒန်ကဗျာ နှစ် ၃၀ ကျော်လို့ ကျွန်တော်တို့ပြောမရဘူးထင်တယ်။ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာ (ဒါမှမဟုတ်) ကဗျာသစ်လမ်းကြောင်းများ စတင်ခွဲထွက်လာသောကာလ လို့ပြောရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အတွေးအမြင်တွေ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ ကဗျာတွေဟာလည်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီးသားပါ။ ထပ်လဲ ပြောင်းလဲနေကြဦးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
၅။ မေး။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ “စန်းဦး”ဆိုတာ “အနုပညာရဲ့သတ္တ၀ါ” (Animal of Art) ဆို တော့ ကဗျာ၊ ၀တ္ထု၊ ပန်းချီတွေရဲ့ ရပ်ဝန်းမှာ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အပင်တွေ၊ အသီးတွေ ဝေဆာအောင် ဖန်တီးနေသူမို့ မြန်မာမော်ဒန်လမ်းကြောင်းထဲမှာ နောက်ဘာတွေများ ဖန်တီးချင်ပါသလဲဆိုတာပါ။ (ဥပမာ) ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လက ပြသခဲ့တဲ့ “တစ်ယောက် တည်း အနုပညာအခင်းအကျင်း” (Animal of Art) ပန်းချီ ပြပွဲဆိုပါတော့ဆရာ။ ။
ဖြေ။ ကျွန်တော်က အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ၀ဋ်ကြွေးရှိခဲ့သူတစ်ယောက်လို မက်မက်စက်စက်၊ ကျိုးကျိုးနွံနွံ၊ ရင်တုန်ပန်းတုန် ရှိဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် စာမရေးဖြစ်ဘူး။ ပန်းချီမဆွဲဖြစ် ဘူး။ ကွန်ပျူတာပေါ်က ဖန်တီးမှုတချို့ရယ်၊ Performance ရယ်။ ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာပဲ လောလောဆယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကိုလည်း အခွင့်အရေးရရင်ရသလို ဖိတ်ခေါ်သူရှိ ရင်ရှိသလို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အားအင်ထည့်ပြီး ဖန်တီး ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက် တည်း အနုပညာအခင်းအကျင်းရယ်လို့ မလုပ်ဖြစ်သေးသော်ငြား အနုပညာနဲ့ပတ်သက် နေရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ပဲ ကျွန်တော့်အဖို့ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေပါပြီ။
© 2014 by Seikkuchocho.
Developed by NEW TECH
Connecting to facebook !
Address : No.7/8, Myanmar Thiri Linka Ya Ma Kyaung Street (Nat Chaung Lane), Nat Chaung, Tamwe, Yangon, Myanmar.
Tel : (+95) 01-543672, 01 546845, 01- 548208 Fax : (+95) 01 542 973
H.P : (+95) 09 31259591
Email : seikkuchocho.order@gmail.com
Website : http://www.skccmyanmarbook.com